Dooni siday hub iyo ciidan oo ku degtay Xeebaha Magaalada Marka - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Dooni siday hub iyo ciidan oo ku degtay Xeebaha Magaalada Marka
October 21, 2019 at 07:47 Dooni siday hub iyo ciidan oo ku degtay Xeebaha Magaalada Marka2019-10-21T07:47:02+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Waxay faah faahin ka soo baxeysaa dooni siday hub iyo ciidan oo ku degtay Xeebaha Magaalada Marka ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Doonidan ayaa waxaa la socday ciidan ka tirsan Guutada 14-ka October ee Ciidanka Xoogga Dalka, iyadoona uu horkacayay G/dhexe Axmed Cabdi Cali (Axmed Gaashaan), Taliyaha Guutada 14-ka October.
Wararka ayaa sheegaya in doonida ay ku degtay meel dhawr kiilo mitir u jirta Dekeda Magaalada Marka, lana soo badbaadiyay toban askari oo uu ku jiro Taliyihii Guutada 14-ka October.
Wararka ayaa intaa ku daraya in nolol iyo geeri aan midna lagu hayn saddex ka mid ah ciidankii doonida saarnaa.
Ciidanka la soo badbaadiyay ayaa waxaa Magaalada Marka la keenay iyagoo hubkooda iyo dareyskooduba ku labisan, balse ay maqan yihiin askartii kale ee safarka badda ay soo wada galeen iyo saanadii ay wadeen.
Ciidankan ayuu ujeedkoodu ahaa in safar dhinaca badda ah ay ku taggaan Magaalada Marka, sababo ku aadan Shabaabka oo dhinaca dhulka ka go’doomiyay magaaladaasi.
Ciidankan oo ka tagey Magaalada Muqdisho ayaa saanad hub ah u siday Ciidamada Dowladda Somaliya ee ku sugan Magaalada Marka, waana markii ugu horeysay oo shil noocaani oo kale ah uu ku qabsado Xeebaha Magaalada Marka.
« Afar arrimood oo lagu xusuusto Dowladdii Kacaankii Siyaad Bare
Waa kee Weeraryahanka uu macallin Ole Gunnar Solskjaer ka dhex arko Jarmalka oo uu doonayo inuu keeno Kooxda Man United? »